တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အသုံးချရန် လာအိုအစိုးရ တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်၌ ရထားလမ်းခင်းနေသည့် အလုပ်သမားများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
စီးပွားရေး ပညာရှင်များနှင့် ဥပဒေပြုသူများက လာအိုအစိုးရအား ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်းမှ ပေးအပ်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများအား အသုံးချ၍ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ရထားလမ်းသည် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကို သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီးပွားရေးအပေါ် ကပ်ရောဂါဆိုးများ၏ သက်ရောက်မှုနည်းပါးစေရန်အတွက် နိုင်ငံကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်တွင်းနေ့စဉ်ထုတ် ဗီယင်ကျန်းတိုင်းမ်စ်က နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
လာအိုအစိုးရသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) တိုးတက်မှုနှုန်း ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၅-၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိရန် ရည်မှန်းချက်ထားကာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စာရင်းစစ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကြီးတန်း စီးပွားရေးပညာရှင် Leeber Leebouapao က အစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း လက်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“မူအရ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းဟာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အပြုသဘောဆောင်သော လမ်းကြောင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် မြင့်မားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုက GDP ထက် မြင့်မားနေပါက တိုးတက်မှု မရှိနိုင်ပါဘူး’’ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်နှင့် လာအိုနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌ Valy Vetsapong က GDP သည် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာနိုင်သော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမက အစိုးရအတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဝင်ငွေတွေ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အသေးစားနဲ့အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SMEs) တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်” ဟု Valy Vetsapong က ဆိုသည်။
“ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက လူတော်တော်များများက လာအိုဟာ သူ့ရဲ့တည်နေရာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘူမိဗေဒအရ အားနည်းမှုကနေ ကုန်းတွင်းချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ဒေသတွင်းအချက်အချာနေရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာမယ့် တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းအကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြပါတယ်” ဟု Valy က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံမှ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကကြီးမြင့်မှုကို နှစ်အတန်ကြာ ခံစားခဲ့ရသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တရုတ်-လာအို မီးရထားလမ်း စတင်လည်ပတ်သည့်အခါ အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Valy က ပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ရှိအစိုးရအတွက် အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ လူဦးရေရဲ့ ၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ဖို့၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပါပဲ” ဟု Valy က ဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် နယ်စပ်တွေ ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ COVID-19 လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကောင်းကောင်း စည်းကမ်းရှိဖို့ လိုပါတယ်” ဟု သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Lao gov’t urged to capitalize on benefits of China-Laos railway
VIENTIANE, Nov.5(Xinhua) — Economists and lawmakers have urged the Lao government to capitalize on the benefits offered by the China-Laos railway to boost economic growth, while doing more to lower the inflation rate.
With the railway attracting the attention of foreign visitors and investors, the government needs to expedite the vaccination program and reopen the country asameans to minimize the damaging impacts of the pandemic on the economy, local daily Vientiane Times reported on Friday.
The Lao government has setatarget for gross domestic product (GDP) growth of4percent and an inflation rate of 5-7 percent for the year of 2022.
However, Chairman of the National Assembly’s Planning, Finance and Audit Committee and senior economist Leeber Leebouapao told the ongoing National Assembly session that the government needs to review these figures.
“In principle, GDP growth must be higher than the inflation rate to reflectapositive trend in national development. If inflation is higher than the GDP, it could mean no growth,” he said.
NA member and Vice President of the Lao National Chamber of Commerce and Industry, Valy Vetsapong, said the GDP could increase by 4.5 percent but the government needed to do more to develop the service sector.
“The service sector is not only about tourism, it also includes SMEs, which can generate more jobs and income for the government through taxes,” she said.
“Many people around the world are talking about the China-Laos railway, which will convert Laos from being geographically disadvantaged by taking advantage of its location and becomingaregional land-linked hub,” Valy added.
Valy said Lao entrepreneurs have suffered from high transport costs for years, but these challenges will be resolved when the China-Laos railway becomes operational in December 2021.
“One of the most important things for the government at present is to speed up vaccination, immunize 80-90 percent of the population, and reopen the country,” Valy said.
“However, the reopening of borders needs to be well regulated to attract investors and visitors while also complying with COVID-19 guidelines,” she said. Enditem